အခါမဲ့မိုး - Neoxian City
"အိမ်မှာထမင်းစားရတာ မကောင်းဘူး၊ အပြင်မှာ ဝယ်စားကြည့်တဲ့အခါ၊ ဆိုင်ကရောင်းတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းက၊ မင်းချက်တဲ့ဟင်းလောက်မကောင်းဘူး...."
ဒီသီချင်းလေး လူတိုင်းကြားဖူးကြမည်ထင်ပါသည်။ ဒီနေ့အတွက် ကျွန်တော်သီချင်းဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆိုင်က ထမင်းဟင်း ဝယ်စားဖို့နေနေသာသာ အိမ်ပြင်လဲမထွက်ရဲ၊ ဟိုသွားဒီသွားလဲ မလုပ်ရဲတဲ့ဘဝသည် မည်မျှ ကျဉ်းကြပ်နေမည်ကို စိတ်ကူးဖြင့် မြင်တွေ့ကြည့်စေချင်သည်။
သို့နှင့် မိသားစုအတွက် ချက်စရာဟင်းသီးဟင်းရွက်ကလည်း အိမ်တွင်ပြတ်လပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ခါတိုင်းဆိုလျှင် အိမ်ရှေ့လမ်းမထက်တွင် ဈေးရောင်းသော ဆိုင်ကယ်ဈေးသည်လေးများ အစီအရီ ဖြတ်သန်းသွားလာနေတတ်ကြသည်။ ယခုသော်ကား ထိုဆိုင်ကယ်ဈေးသည်လေးများမလာသည်မှာ ရက်သတ္တ တစ်ပါတ်ကျော်သွားချေပီ။ သို့နှင့် ကျွန်တော်တို့ မီးဖိုချောင်သုံး ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှအစ အသားငါးတို့သည်လည်း ပြတ်လပ်လို့နေတော့သည်။
ယခင်လကတည်းက မိသားစုအတွက် ၂ပါတ်စာ အနည်းဆုံး အရေးပေါ် ရိက္ခာများ စုဆောင်းထားရန် ညွှန်ကြားချက်ကို သိရှိရပီးကတည်းက မဟေသီသည် ငါးခြောက်ငါးခြမ်းများနှင့် အသားခြောက်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်များကို အဓိကထားကာ သိမ်းဆည်းသိုလှောင်ထားပေသည်။
ထိုသိမ်းဆည်းထားသော ရိက္ခာခြောက်ထုပ်များကို အခုချိန်တွင် မထိပါးရဲသေးချေ။ တကယ်အရေးပေါ်အခြေအနေက အခုမဟုတ်သေးဆိုသည်ကို သိနေသည့်အတွက် လက်တလော ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုကို အလွယ်နည်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနေလိုက်သည်။
ယခုပြတ်လပ်သော ရိက္ခာမှာ ဆန်၊ဆီ၊ဆား မဟုတ် ဟင်းချက်ရန် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့မဟုတ် အသားငါး ဖြစ်နေသည်။ သို့နှင့် ကျွန်တော်တို့ မိသားစု အအေးပုန်းလေးထဲ သိမ်းထားသော အသားရိက္ခာထုပ်လေးအား ဖွင့်ကြည့်ရာ ကြက်သားအနည်းငယ်အား တွေ့ရသည်။
"အဲဒါ အရင်သုံးရက်လောက်က ကြက်သားဝယ်တုန်းက အရိုးအသားလေးတွေ အမေခွဲချန်ထားတာလေ" လို့ အမေဖြစ်သူမှ မှတ်ချက်ပေးသည်။ "ကိုင်း ဒါဖြင့် ဒီကြက်သားချန်ထားတာလေးကို မိသားစုလေးယောက်ဝေမျှစားဘို့ အကောင်းဆုံးနည်းကို ရွေးကြစို့"။ "ဟင်းချက်မယ်ဆို ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်၊ အမယ်တွေလိုမယ် အခုချိန်မှာ ခြွေတာတဲ့အနေနဲ့ ဒီကြက်သားကို အရိုးပါဝါးစားလို့ရအောင် ကျွန်တော် အကြွပ်ကြော်ပေးမယ်လေ"။
"အင်း ကြက်သားက ဗမာကြက်လေးဆိုတော့ အရိုးနဲ့ အသားက ကပ်နေတာ အကြွပ်ကြော်ရင် အကုန်ဝါးစားတတ်ရင် အတော်ပဲ အမေတော့ သွားမရှိလို့ မစားတော့ဘူး ပဲပြုတ်လေးကျန်တာနဲ့ ဆီဆားလူးပီး စားလိုက်တော့မယ် မင်းတို့လူငယ်တွေသာ ကြက်သားကြွပ်ကြော်စားလိုက်ကြတော့" အမေ၏ ဦးစားပေးသော မိခင်မေတ္တာအား လေးစားမိသည်။
ထို့နောက်တော့ ကျွန်တော်၏ တနပ်စာ ကြက်သားကျန်သည်လေးအား အကြွပ်ကြော်သည့်နည်းဖြင့် ကြော်ချလိုက်တော့သည်။ "ဗျာ - ကြက်သားအကြွပ်ကြော်နည်း သိချင်လို့- ဟုတ်လား- အော် ဒါလား လွယ်ပါတယ်ဗျာ။"
"မည်သည့်အသားမဆို အချဉ်ရည်နဲ့ လူးနယ်ပီး ဆီပူပူမှာ ကြော်စမ်းပါ ကြွပ်ရွသွားတယ်ဗျ" "အချဉ်ရည်ဆိုတာ ရှာလကာရည်၊ သံပုရာရည်၊ ရှောက်ရည်- အဲဒါတွေပေါ့" ကဲကျွန်တော်ကြော်ထားတာကြည့်။ " အင်းအရင်ဆုံး အသားတွေကို တရေလောက်ခန်းအောင်တော့ ပြုတ်ထားဗျ။ ကြက်သား၊ ဘဲသား၊ ဆိတ်သား၊ စသည်ဖြင့် အကုန်ရပါတယ်။" ပုဇွန်တို့ ငါးတို့လဲရပါတယ် ကြွပ်ရွသွားအောင် ကြော်ချင်ရင် ဒီနည်းကိုသုံးပါတယ်ဗျာ။
( သံပုရာရည် ညှစ်မယ် )
( အသားထဲ စိမ့်ဝင်အောင် နယ်မယ် )
( စကြော်မယ် )
ကြော်နေစဉ်တော့ အဖုံးလေးအုပ်ထားဗျ အချဉ်ရည်ပါတော့ ဆီပူပေါက်ပီး စဉ်တတ်၊ ဆီအပူလောင်တတ်ပါတယ်။
ငါးမိနစ် သို့မဟုတ် မီးအားကောင်းလျှင် သုံးမိနစ်ခန့်ကြော်ပီး အထက်အောက်လှန်ပေးပါ။ မကြွပ်သေးတဲ့ အခြမ်းကို ကြွပ်အောင် ဆက်ကြော်ပါ။
( ကြက်သွန်ဖြူလေး အနည်းငယ် အခွံချွတ်ထောင်းထားပါ )
( အရိုး၊ အသားတွေ ကြွပ်လာနေပီနော် )
( အသားတွေကြွပ်ရွ ကျက်သွားပီ ဆယ်ထားမယ် ကြက်သွန်ဖြူလေး ကြော်မယ် )
( အသားကြော်ပေါ်ကို ကြက်သွန်ဖြူကြော်တာလေး လောင်းချလိုက်တော့ )
ဒီနေ့ညအတွက် ကြက်သားအရိုးအသားလေးတွေ ကြွပ်ကြွပ်ရွရွလေးနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကြော်လေးက မွှေးလို့ ။ ထမင်းပူပူ မှာ ဆီလေးဆမ်း ဆားလေးဖြူးပီး မိသားစုလေးယောက် စားလိုက်ကြတာ ထမင်းအိုးတစ်လုံး ပြောင်ပါရောဗျာ။ ကြက်တောင်ပံ၊ လည်ချောင်းရိုး၊ ဖင်ဆီဖူး၊ အသဲအမြစ်၊ ကြက်ရင်အုပ်က ဗမာကြက်ဆိုတော့ အသားလေးက ပါတယ်ဆိုရုံပဲ အရိုးကို ဟင်းလုပ်စားလိုက်ကြသည်။
ဒီနေ့အတွက် ထမင်းတနပ်၊ ဟင်းတစ်နပ်တော့ ပြေလည်သွားပါပီ မနက်ဖန်မနက် အိမ်ရှေ့ဈေးသည်မလာပါက ရိက္ခာခြောက်ထုပ်လေးများ အလှည့်ကျပါတော့မည်။ ဆန်မကုန်သေးသရွေ့တော့ မငတ်သေးပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့် ဘာဟင်းရိက္ခာမှ မကျန်တော့လျှင် ပဲကြော်ထုပ်များ ကျန်သေးသည်။ မနက်ဖန် ပဲကြမ်းကြော်သုပ်နှင့် စခန်းသွားရဖွယ်ရှိသည်။
အိမ်ပြင်ဘက်တွင်တော့ အချိန်အခါမဲ့ မိုးများရွာသွန်းနေသည်။
မြန်မာ ဟိုက်ဗ်ကွန်မြူနတီမှ မိတ်ဆွေအပေါင်း ရိက္ခာပြတ်လပ်သည့် အခြေအနေမှ လွတ်ကင်းကြပါစေ။
hive-122133 blog proofofbrain trafficinsider neoxian waivio hive-list foodie sharing writing
Good foodie. အခါမဲ့မိုးကလည်း ရွာတတ်လိုက်တာ။ !LOLZ
ဟုတ်တယ် ရာသီဥတုက မကောင်း !LOLZ
@kachinhenry(18/18) tipped @nyimwa (x1)
ဟုတ်ပါ့ ကွီးရွေရေ နိုင်ငံရေးကြောင့် လူတွေလည်းအကျပ်အတည်းဖြစ်နေကြလို့ပါ။!PIZZA
အခက်အခဲက လူတိုင်းမှာလေ ဒီလိုပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေကြရတာ။ !LOLZ
အဲ့သလိုကြော်ကြည့်အုံးမယ် ခုတော့ သံပုရာပင်က အသီးမရှိသေး။
လုပ်ကြည့်ပါ ကြိုက်သွားမယ် ။ !LOLZ
ကြော်စားကြည့် အုံးမယ်...!PIZZA. !LOL. !LUV
ဟုတ်ကဲ့ကိုဟင်ရေ ကြော်စားကြည့်ပါ အရသာကြိုက်သွားမယ်ဗျ။ !LOLZ